Dawooyinkii ay masaaridii hore u adeegsan jireen kaydinta meydadka - BBC News Somali
Dawooyinkii ay masaaridii hore u adeegsan jireen kaydinta meydadka
Xigashada Sawirka, DR STEPHEN BUCKLEY/ UNIVERSITY OF YORK
Tijaabo lagu sameeyay meyd muddo dheer keydsanaa ayaa lagu ogaaday dawooyinkii rasmiga ahaa ee ay Masaaridii hore u isticmaali jireen in ay meydadka ku keydiyaan, taas oo ahayd markii ugu horreysay ee la isticmaalay
Cilmi baaristan oo loo adeegsaday kiimikooyin xoog badan ayaa lagu fuliyay haraadiga qalfoofta meyd keydsanaa intii u dhaxeysay 3500-3700 ka hor dhalashadii nabi Ciise, waxaana lagu ogaaday nooca ay ahaayeen dawooyinkaas, iyadoo sidoo kalena la xaqiiqsaday in waqtigaas ka hor la sameeyay lana sii isticmaali jiray.
Xubno ka socda Matxafka Masaarida ee uu fadhigiisa yahay magaalada Torino ee dalka Talyaaniga ayaa hadda ku sugan Masar si ay arrintan wax uga ogaadaan.
Macluumaadka la helay ayaa lagu soo daabacay wargeys ka faallooda arrimaha sayniska iyo taariikhda bani'aadamka.
Daraasad tibaaxday duruufaha nololeed ee mataanaha Afrika ku dhasha
Cilmi baaris lagu sameeyay geedka fooxa laga gurto
Waxyaabaha meydka lagu dahaaro ayaa asal u ahaa daraasaddan
Dr Stephen Buckley, oo ah aqoonyahan ku xeel dheer cilmiga taariikhda bani'aadamka, kana tirsan jaamacadda York ayaa BBC-da u sheegay in haraadiga meydkan tijaabada lagu sameeyay uu sahlay in la fahmo sirta ku saabsan keydinta meydadka ee ay Masaarida isticmaalayeen 4,000 oo sano.
Dr Buckley iyo saaxiibadiisa shaqada ayaa ka shaqeeyay tijaabadan oo lagu abbaarayay "faro laga qaaday" haraadiga meydadka keydsanaa, in kastoo natiijada ay ka soo baxday ilo dhowr ah.
Sidaas awgeed daawooyinka dabiiciga ah ee aasaasiga ah waxay ahaayeen:
Saliid - oo loo badinayo in ay tahay saliid macsaro;
ubaxyo dhir iyo xididdo;
Xabag iyo sokor dabiici ah oo loo maleynayo in laga soo saaray mid ka mid ah geedaha miraha macaan;
Dhacaan laga saaray qeybta dhexe ee jirrida geed lagu magacaabo Pine
Markii waxyaabahaas lagu qaso saliidda ayaa la marin jiray meydadka si ay waqti dheer u raagaan iyagoo aan qurmin.
Keydinta meydadka ayaa qeyb ka ah dhaqanka soo jireenka ah ee dadka masaarida, waxaana uu soo jiitay seynisyahannada oo isku howla in ay cilmi baaris ku sameeyaan.